China CAT Style J250 Twin Tiger Tooth 1U3252WTL ụlọ ọrụ na ndị na -eweta ya | Aili
J300 CAT 4T2303RP Rock Penetration Bucket Ezé
Ihe nkwụnye ihe mkpuchi ezé ịwụ - J250 (6Y3254)
CAT Style J250 Twin Tiger eze 1U3252WTL
CAT320 PC200 SK200 CAT312 CAT330 CAT336 excavator bu ...
Aili rụpụtara mere Caterpilliar E200 CAT320 excav ...
Bọketị ọkọlọtọ excavator Hyundai R210 nwere nha OEM
China Aili mgbatị 9W8552TL nwamba J550 Construction Bu ...
China ịwụ dente 9W8552RC eze nha nwamba J550 Eji maka ...
9W8452TL CAT J450 ịwụ Ezé Maka E330 Excavator
9W8452RC nwamba J450 Long Ndụmọdụ ịwụ Nha nha eji E330 ...
Nwamba J460 Excavator ịwụ Nha nha 9W8452 (E330/E336)
7T3402TL CAT J400 Construction Bucket Teeth Jiri maka ...
7T3402RC CAT J400 Construction Bucket Teeth Jiri maka ...
1U3352RC-1 nwamba J350 excavator Long n'ọnụ ịwụ nha nha ...
1U3352RC CAT J350 ihe mkpuchi ịwụ excavator ejiri maka E320 ...
Onye nrụpụta mbụ: CAT
Ụdị: Twin Tiger
Ụdị igwe: onye na -egwupụta ihe
Ibu ibu: 3.3 n'arọ
Aha ndị a na -akpọkarị: Tiger, Tiger Twin, Points, Spike Double
Akụrụngwa: alloy steel Material Akwa eyi ihe na -eguzogide ọgwụ）
Nke gara aga: Bọket excavator CAT320 PC200 SK200 CAT312 CAT330 nwere mgbakwunye ịwụ
Osote: Ihe nkwụnye ihe mkpuchi ezé ịwụ - J250 (6Y3254)
Ọ dị na mpaghara Yichun City Jiangxi mara mma, dị nso n'ọdụ ụgbọ mmiri Ningbo na ọdụ ụgbọ mmiri shanghai.
Aili bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ọkachamara na R&D, imepụta na ire nke akụkụ nkedo nkenke. Aili guzobere na 1980, anyị enweela ahụmịhe nkedo afọ 40. nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200; Ike mmepụta kwa afọ bụ tọn 24,000; Mbupụ na ụwa niile karịa mba 100; Mpịakọta Ahịa Kwa Afọ karịrị nde dollar iri atọ n'etiti ya, 60% bụ ahịa mba ofesi, 40% bụ ahịa ụlọ.
Anyị ụlọ ọrụ nwere elu ego mgbatị akara, ibe ya ahịrị, gburugburu ebe obibi enyi na enyi na-ous okpomọkụ ọgwụgwọ ọkụ, nakwa dị ka n'elu ule kwadebere na ụlọ ọrụ a.
Ugbu a, anyị na -enyekarị ụdị bọket ihe mkpuchi, bucke tteeth & ihe nkwụnye ọkụ na ụfọdụ nkenke nkedo & ngwaahịa adịgboroja.
Anyị nwere ike zụlite ma chepụta ụdị ebu dị iche iche, ịkpụzi nke ọma na na -emegide arịrịọ pụrụ iche.
Akara ahia: Aili
AIli nwere ụlọ nrụpụta ihe dị omimi, ụlọ ọrụ ihe nkiri seramiiki, ahịrị nrụpụta akpaaka anyị nwekwara ike ịkpọ ahịrị nhazi ụdị nrụgide Static (SPML, Aili bụkwa naanị onye nrụpụta na China na -eji ahịrị nrụgide static mepụta ezé na nkwụnye, ụlọ nrụpụta nkenke, ebu na CNCmachining center.
Anyị nwere akụrụngwa nyocha physicochemical kachasị elu gụnyere: Onye nyocha ihe nlele anya nke na-enyocha ma nyochaa ihe mejupụtara kemịkalụ, igwe onyonyo onyonyo nke na-anwale
Igwe nyocha: Anyị nwere igwe ịcha waya 6, melite ọsọ nke ule arụmọrụ n'igwe
Rockwell Hardness Tester na Brinell hardness tester iji nwalee ngọngọ ahụ, igwe abụọ a nwere ike inye ndị ahịa ihe nrụtụ aka ike dị iche iche.
Ngwa nnwale mmetụta anyị, igwe nnwale tensile iji nwalee ịdị nkọ na esemokwu.
1.na -arụkọ ọrụ na ụdị ama ama n'ụwa, 1.bụ onye na -ebubata VOLVO kemgbe 2014 2. ịbụ onye na -ebubata akara mbụ nke SDLG na -ebu ibu n'ụwa na 2018.
2.Certificate nke Patent Kere, anyị nwetara nke a na 2016.
3.Aili bụ naanị ụlọ ọrụ dị na China nke nwere ike ịmepụta ihe mejupụtara kemịkalụ n'adabereghị.
Nnyocha na -enweghị isi na nkwalite mmepe, ụlọ ọrụ anyị nwere ngalaba R&D nọọrọ onwe ya, nke akọwapụtara nke ọma n'ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ.
5. ụlọ nkwakọba ihe nwere ihe karịrị 20 puku spuare mita, nwere ike ịchekwa ngwaahịa ruru tọn 3000 n'ime ya. Ngwa ahịa MDF juputara na ngwongwo mbupụ na anyị ga-etinye plastik na-egbochi mmiri iji gbochie nchara n'oge mbupu n'elu mmiri.